नेपालमा पर्यटन : विगतदेखि वर्तमानसम्म शुक्रवार, पुष १८, २०७६
बुटवलमा विपीसँगको त्यो पत्रकार सम्मेलन बुधवार, पुष १६, २०७६
यस्ता खाना मन्द विष हुन् सोमवार, पुष १४, २०७६
‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ उज्यालोको प्रस्थान बिन्दु हामी ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को पूर्व सन्ध्यामा छौं । यसको शुभारम्भ काठमाडौंको दशरथ रङ्गशालामा १ जनवरी २०२० बाट भव्यताका साथ हुँदैछ । ठिक त्यही दिन सातै वटा प्रदेशमा पनि एक साथ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ को शुभारम्भ हुनेछ । हामीले यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेका छौं । सोमवार, पुष १४, २०७६
कागज एक जिन्दगी जोर सल्लाको कहानी निकै लामो छ । सल्लाका हाँगा जस्तै अनेकौं तितामिठा कथाहरु सोही जोरसल्लाका मुढाका फल्याकबाट तयार पारिएको उरिमसंग जोडिएका छन् । साउनभदौमा आफ्नै बारीमा पाकेको र बालीघरेप्रथाबाट उठेको मकैले भरिन्थ्यो सो उरिम । तर पुसमाघ नसकिँदै तम्घासका मगर्नीहरु आउँथे र बोराकाबोरा भकारी रित्तै बनाएर लगेर जान्थे भन्ने अनिकाले मर्मभेदी कहानी कहन मलाई अझै केही समय लाग्ला । शनिवार, पुष ५, २०७६
अब कांग्रेस सकिने भयो भनेर केशरजंगहरु पाल्पामा खुशी मनाइरहेका थिए मेरो काका पाल्पाको जिल्ला विकास सभापति हुनुहुन्थ्यो । म पनि तान्सेनमा काकाकै सहयोगीको रुपमा काम गर्दथें । कांग्रेसको राजनीतिमा पनि सक्रिय थिएँ । मंगलवार, पुष १, २०७६
कस्तो नेतालाई सक्षम भन्ने ? कुनै पनि राष्ट्र वा संघसंस्थाको प्रगति तथा समृद्धिका लागि सक्षम नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । सक्षम नेतृत्व त्यस्तो नेताले दिन सक्छ, जसको हृदयमा ईमानदारीता र मस्तिष्कमा भावनात्मक बुद्धिमत्ता हुन्छ । यस्ता गुणहरु भएका नेता नै सक्षम नेता हुन् । सक्षम नेता नै हरेक राष्ट्र वा संघसंस्थाको आवश्यकता हो । त्यसैले नागरिक तथा संघसंस्थाका सदस्यहरुले नेता चुन्दा नेतामा यी दुई गुणहरु छ कि छैन हेर्नुपर्छ । शनिवार, मंसिर २८, २०७६
विकासको अन्धो दौड विश्वभरिमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा विकास भइरहेको छ । फलस्वरुप मानिसहरुको जीवनस्तर सुध्रिराखेको छ । तर विकासको यस अन्धो दौडका कारण पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हुँदै छन् । बिहिवार, मंसिर २६, २०७६
धुलोले ढाकेको लुम्बिनी र पर्यटन लुम्बिनीमा वायुप्रदूषण, ध्वनीप्रदूषण, जलप्रदूषण तथा भू–प्रदूषण जस्ता समस्याहरू तिब्रगतिमा बढ्दै आएको देखिन्छ । भ्रमण गर्न जानेको अनुहार नै चिन्न नसक्ने गरी धुलो र धुबाँले ढाकेको हुन्छ । अहिले छ सडक बन्दै छ भनी चित्त बुझाएपनि यो अवस्था संबेदनशील छ । शनिवार, मंसिर ७, २०७६
सिस्नो : पेटको मैला बढार्ने कुचो सिस्नो पोषणहरुको पावरहाउस हो । सिस्नोमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, आइरन, पोटासियम, म्यागानिज तथा क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थहरु पाइने र यसमा अनेक रोगहरु ठीक पार्ने औषधीय गुण समेत भएकाले यो सुपरफुड हो । सोमवार, कार्तिक २५, २०७६
सुत्केरी मसला ! सुत्केरी मसलाले सुत्केरीको शरीर तङग्रिन मद्दत गर्छ । सुत्केरीको स्तनबाट दूध निकाल्न मद्दत गर्छ । आइतवार, कार्तिक २४, २०७६
पोलियो थोपाले पैरालाइसिस ? पोलियो भाइरस विशेष गरेर रोगीको घाँटी तथा आन्द्रामा रहन्छ । पोलियो रोगीको दिसाबाट यी भाइरसहरु बाहिर निस्कन्छन् र वातावरणमा फैलिन्छन् । पोलियोको भाइरस दुषित खाना, पानी र फोहोर हातबाट बालबालिकाको शरीरमा प्रवेश गर्छ र दिसाबाट बाहिर निस्केर अरुमा सर्दछ । आइतवार, कार्तिक २४, २०७६
कालापानी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ अहिले सडकको आन्दोलनले केवल नकारात्मक राग अलापेर मात्र हुँदैन, अब राज्यका निकायका जिम्मेवारीको खोजीनिति पनि गर्नु पर्छ। अहिले वक्तव्यको बाढी लागेको छ। हरेक मानिसले वक्तव्य दिनु पनि पर्दैन। यो समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। त्यसले राष्ट्रलाई आस्वस्त पार्नुपर्छ। यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि आउनु पर्ने अवस्था देखियो। यो बिडम्बना हो। हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको भूमिका एक्दमै कम्जोर देखियो। शनिवार, कार्तिक २३, २०७६
जीतगढी किल्ला जीतगढी ईट, ढुङ्गा, माटो र सूर्खीको थुप्रो मात्र होइन । नेपालीहरुको रगत पसिनासँग वीरता, धीरता र राष्ट्रियता साटिएको र कम्पनी सरकारको साम्राज्यवादी पाइलाहरु थामिएको बिन्दू ‘जीतगढी’ हो । अझ खासै भन्नुपर्दा विश्व विजयको शंखनाद गर्ने कम्पनी सरकारले यस्तो पहाडी कन्दरामा पनि आफूलाई मेख मार्ने शक्ति रहेको महशुस गरेको विन्दु नै ‘जीतगढी’ हो । बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
दलितका शत्रु दलित दलित समुदायका पढेलेखेका र समाजमा सचेत भनेर चिनिएका युवाहरुले छुवाछुतजन्य भेदभावको निर्मूलीकरणको आधार अन्तर्जातीय बिवाहलाई मान्दारहेछन् । मन मिलेर, एकअर्कामा प्रेम भएर, सँगै ज्युने वाचा गरेर बिवाह गर्नेभन्दा समाजमा आफूभन्दा कथित उपल्लो जातकी छोरी भगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लालसाले त्यसरी बिहे गर्नेहरु झन् ज्यादा रहेछन् । सोमवार, कार्तिक १८, २०७६
एङ्ग्लो नेपाल वार, ऐतिहासिक जीतगढी र राष्ट्रियता कम्पनी सरकारले नेपाल उपर एकतर्फ युद्ध घोषणा गरेपछि नेपाल पनि आफ्नोे तैयारीमा जुट्न थाल्यो । बुटवल बजारको छेउ भएर बग्ने तिनाउ नदीको किनारमा रहेको जीतगढीबाट जमिन अग्लिदै उच्च पहाडको टुप्पामा नुवाकोटगढी रहेको र सो गढीबाट पहाडै पहाड भएर पाल्पा जाने बाटो पनि छेकिने र हाल पाल्पा जाने र राजमार्गको बाटोको निगरानी पनि गर्न पनि सकिने सामरिक दृष्टिकोणले महत्व रहेको नुवाकोटगढीलाई मुख्य सुरक्षा बनाइएको थियो । सोमवार, कार्तिक १८, २०७६